Extremadura मा के हेर्ने यात्रा समाचार
Extremadura मा के हेर्ने
Extremadura यो स्पेनको एक स्वायत्त समुदाय हो र दुई प्रान्तहरू, Badajoz र Cceres बाट बनेको छ। यो हजारौं वर्षको इतिहासको भूमि हो, जुन आजसम्म संरक्षित डोलमेन, गुफा चित्रकला र मूर्तिहरूको साक्षी रहेको छ।
यी सहस्राब्दीले हामीलाई ल्याउँछ धेरै पर्यटन गन्तव्यहरू र धेरै धनी संस्कृति हो, त्यसैले आज हामी एक्स्ट्रिमुरा र यसका आकर्षणहरूको लागि यात्राको प्रस्ताव राख्छौं। आज त्यसपछि के Extremadura मा हेर्न।
2 Extremadura मा के यात्रा गर्ने
यो एक क्षेत्र हो कि इबेरियन प्रायद्वीप को दक्षिण पश्चिम हो र हामीले अघि नै भनेजौं, यो दुई प्रान्तहरू मिलेर बनेको छ जसको राजधानी सबैभन्दा अधिक जनसंख्या भएको शहरहरू हो। एक न्यानो देखि शीतोष्ण मौसमटमाटर, खुर्सानी, सुर्ती र अpes्गुरहरू यहाँ हुर्केका हुन्छन्, जहाँबाट स्वादिलो ​​वाइन बनाइन्छ।
को रोमान्स तिनीहरू यहाँ बसोबास गरे, सडकहरू बनाए, सर्कस, बजार र सार्वजनिक भवनहरूको साथ सम्पन्न शहरहरू। उदाहरणका लागि, मेरिडा एक विशाल, जीवन्त, सांस्कृतिक दृष्टि धनी शहर भयो। पछि साम्राज्य पतन हुन्छ र केही जंगली मानिसहरू आइपुग्छन्, जसमध्ये बीचमा थियो भिजिगोथहरू, द्वारा विस्थापित Saracens मध्य युगमा।
Este मुस्लिम अवधि उनी रोमीभन्दा कम धनी थिएनन् र पुन: विजय सम्म centuries शताब्दीसम्म चलेको, लियोनको राज्य पहिलो र क्यास्टिलको राज्य पछि। दुबै राज्यको एकीकरण पछि ती मुकुट अन्तर्गत एक्स्ट्रेमादुराको दुई क्षेत्र पनि एकजुट भए। क्याथोलिक राजाहरूको आदेशले यहूदीहरू, इसाईहरू र मुसलमानहरूको मेलमिलाप समाप्त भयो जुन सबैले इसाई धर्ममा परिवर्तन गर्नुपर्दछ वा उनीहरूलाई निष्कासन गरिनेछ।
१ the औं शताब्दीमा धेरै स्पेनी साहसीहरू अमेरिका आएका एक्स्ट्रेमादुराका थिए। उदाहरण को लागी, Hernán Cortés, फ्रांसिस्को Pizarro, पेड्रो डी Valdivia... पछि आन्तरिक संघर्ष र स्पेनको स्वतन्त्रता को युद्ध आउँछन्, र तिनीहरूको हातबाट, शोक र पीडा र विशाल आन्तरिक प्रवासन तिनीहरूबाट भाग्न।
Extremadura मा के यात्रा गर्ने
भने कि एक्स्ट्रेमादुराको शताब्दीयौंको इतिहास छ, सिद्धान्तमा हामीले ती सयौं, हजारौं वर्षको विरासतको कुरा गर्नुपर्दछ। को रोमन अवधि हामी भेट्न सक्छौं मेरिडा रोमन रोमन भग्नावशेष प्लाजा मार्गारीता जिरगुमा छन् र यसले प्रायद्वीपमा रोमन जीवनको मार्गमा एउटा झ्याल खोल्दछ। यो छ विश्व सम्पदा र स्पेनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक साइटहरू मध्ये एक।
रोमन भग्नावशेष उपनिवेशको भित्तामा छन्: त्यहाँ एक थिएटर, एम्फीथिएटर र एम्फीथिएटरको घर, एक सर्कस र एक बेसिलिका छ। त्यहाँ छ चमत्कारको अन्वेक्षण, पेर्टिको डेल फ्रो, ट्राजनको आर्क, मिटरियोको घर र डायनाको मन्दिर। भित्ताहरू बाहिर अर्को जलग्रहण छ, सान लजारो, गुआडियाना नदीमा पूल, Alange तातो स्प्रिंग्स (मेरिदाबाट १ 18 किलोमिटर टाढा, यो तेस्रो शताब्दी ईस्वीको हो र यसको गुम्बजहरू पनि रहेको मानिन्छ), र दुई बाँधहरू, प्रोसेर्पीना र कर्नाल्भो।
यो पुरातात्विक परिसर अप्रिल देखि सेप्टेम्बर बिहान9देखि १० बजे र अक्टुबर र मार्च बीच बिहान 10 देखि साँझ :9: .० सम्म खुला छ। यस प्रवेशद्वारमा सम्पूर्ण सेटको लागि १eयूरो र प्रत्येक स्मारकको लागिeयूरो लाग्छ। अर्को रोमन साइट हो Cáparra खंडहर, प्लासेन्सिया को शहर बाट केहि किलोमिटर। त्यहाँ एउटा मार्ग छ जुन आगन्तुकले पछ्याउँदछ र त्यसले उसलाई व्याख्या केन्द्र, तीन नेक्रोपोलिजहरू, ढोका र एम्फीथिएटर मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ। प्रवेश निःशुल्क छ।
रोमन अवधिलाई पछाडि छोड्दै हामी प्रवेश गर्छौं अरबी अवधि con अल्काजाबा, Badajoz को शुरू देखि दर राजाहरूको निवास। आज हामी अल्मोहद कालदेखि १२ औं शताब्दीको मिति देख्छौं, तर यो विश्वास गरिन्छ कि यसको उत्पत्ति XNUMXth औं शताब्दीमा छ।
अल्काजाबा एक हो किल्ला पनि पोर्चुगल संग सीमा नियन्त्रण र यो धेरै ठूलो र प्रभावशाली छ। योसँग चारवटा ढोका छन् र तपाईं ती मध्ये कुनै एकबाट पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। कोराक्सा र आफैंको ढोका बाहेक, त्यहाँ अप्न्डीज र क्यापिटेल ढोका छन्, जुन अल्मोहद कालका हुन्।
त्यहाँ टावरहरू पनि छन्, टोरे डी एस्पेन्ट्याप्रस, अष्टभुज, तिनीहरूमध्ये बाहिर उभिए। भित्र रोका काउन्ट्सको प्यालेस छ जुन आँगन हो जुन आज प्रान्तीय पुरातात्विक संग्रहालय, सान्ता मारियाको टावर, एपिस्कोपल दरबारको टावर र बगैंचाका रूपमा कार्य गर्दछ।
को ला अल्काजाबाको पर्खालका पानोरमिक दृश्यहरू तिनीहरू महान छन्। प्रवेश निःशुल्क छ र प्रवेश शुल्क लाग्दैन। यो Cerro de la Muela मा अवस्थित छ। Cceceres मा छ गुवादालुपको रोयल मठ यो एउटा सानो सम्पत्तीबाट आएको हो जुन अल्फोन्स इलेवनको शासनकालमा मुडेजर चर्च बन्यो। गुम्बा चर्चका तीन संस्करणहरू छन् र हालको एउटा गोथिक शैलीमा छ। वेदीपीसमा एल ग्रीकोको छोरो, जर्ज मानुएल थियोटोसीपुलीको मूर्तिकलाहरू छन्।
यो वास्तवमै धेरै सुन्दर अंदरूनी छ र यसको संग्रहालयहरु यसको लायक छ: एउटा कढ़ाईका लागि हो, अर्को चित्रकला र मूर्तिकलाको लागि, र अर्को सानो किताबहरूको लागि। मठ बिहान :9: to० देखि दिउँसो १ र साँझ 30::1० देखि3सम्म खुल्दछ। सामान्य दरeयूरो हो। अर्को रोचक मठ हो Yuste को शाही मठ, एक प्रभावशाली मठमा कम्प्लेक्स जसमा उसले आफ्नो अन्तिम दिनहरू बिताए कार्लोस भि। उनको रहनु मात्र सुशोभित। मठ स्पेनको राष्ट्रीय सम्पदाको अंश हो। जाडोमा यो मंगलबार देखि आइतबार बिहान १० देखि साँझ 10 सम्म खुल्छ, र गर्मीमा बिहान १० देखि साँझ6सम्म। प्रवेशद्वारको लागतeयूरो छ।
यदि हामी प्राकृतिक परिदृश्यको बारेमा कुरा गर्छौं भने यो पालोको पालो हो Monfragüe राष्ट्रीय पार्क, वनस्पति र पक्षी विज्ञान को प्रेमियों को लागी। यो प्लासेन्सिया, नेवलमोराल डे ला माता, र ट्रुजिल्लो द्वारा बनाईएको त्रिकोणमा अवस्थित छ। ट्यागस नदी यसको स्तम्भ हो र युनेस्कोले पार्क घोषणा गर्‍यो जैव क्षेत्र रिजर्व.
यी पर्वतीय क्षेत्रहरूमा त्यहाँ जलाशयहरू, खोलाहरू, चट्टानहरू, ज and्गल र झाडीहरू छन् जुन एकका लागि आदर्श वासस्थान हो। विविध र समृद्ध वनस्पति र जीवजन्तु। सबै प्रकारका पक्षीहरू, कालो सारस, गिद्धहरू, चील, र वन्यक्याटहरू, हिरण, ओट्टरहरू जस्ता पशुहरू ...
यस पार्कको भित्र मोनफ्रेजी, अरबीको महल छ जसको समयमा राजकुमारी नोइमा बसोबास गर्थिन्, एक इसाईसँग प्रेमको कथा छ र यसै कारणले उनलाई सजाय दिइयो। त्यहाँको शहर पनि छ Villareal de सैन कार्लोस, जहाँ तपाईं बस्न, खान र पर्यटन केन्द्रहरूको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ क्षेत्र बारे जानकारी प्राप्त गर्न। त्यहाँ साइनपोष्ट गरिएका मार्गहरू छन् जुन तपाईंलाई पार्क मार्फत लिएर जान्छन् र विशेष गरी गीतानो झरनातर्फ, ट्यागस नदीमा 300०० मिटर अग्लो चट्टान। त्यो सुन्दरता!
गर्न अर्को स्थान ट्रेकिंग र प्राकृतिक पोखरीमा पस्न सकिन्छ Melero को meender। को लस बैरुइकोस प्राकृतिक स्मारकCceceres मा, तपाईं पोखरी र गुम्बजको साथ एक हडताली चट्टानी परिदृश्य देख्नुहुनेछ। को ओरेलाना बीच यो उही नामको जलाशयको समुद्रतट हो, ओरेलाना ला भिजामा, Badajoz मा।
यो एक छ निलो झण्डा बीच र यो एक अंतर्देशीय समुद्र तट हो। यसलाई Playa Costa Dulce पनि भनिन्छ र तपाईं विभिन्न पानी खेलहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को जलाशयको किनारमा, गेब्रियल वा गालान जलाशय, तर कोरेसमा, हो Granadilla ऐतिहासिक परिसर।
यो एक थियो Muslims औं शताब्दीमा मुस्लिमहरूले स्थापना गरेको शहर, पर्खाल, र को प्रक्रियामा एक सांस्कृतिक पर्यटन गन्तव्य बन्नको लागि। यसले यसको अल्मोहद पर्खाल जोगाउँदछ, गढीले क्रिश्चियन महलमा परिणत गर्‍यो, महत्वपूर्ण व्यक्तिको पारिवारिक आवासहरू, जुन उनीहरूको संरचनाहरूमा कहिलेकाँही मौलिक थियो, र ११ औं शताब्दीको पेरिश चर्च।
के हेर्ने भनेर यस संक्षिप्त सूचीको साथ Extremadura हामी अवश्य पनि छोटो हुन लागेका छौं। र के यो एक्स्ट्रेमादुरा धेरै ठूलो समुदाय हो, यदि तपाईंसँग केहि दिनहरू छन् भने सबै माथि जान असम्भव छ। यदि यो तपाईको केस हो भने ठाउँहरु र विचारहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि अन्तिम टिप: मरिदा र सेक्रेस अस्वीकार्य छन्, Badajoz पनि, तर यसको अतिरिक्त हामी तपाईलाई यी शहरहरू भन्दा शान्त केही कुरा चाहान्छ भने शहरहरूमा जानुहोस। त्यहाँ तपाईं साँच्चै आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » Extremadura मा के हेर्ने
Fiedo Ciñera बाट